२०७८ पौष ९ शुक्रबार ०६:१०:००
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । मतपरिणामअनुसार नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको दुईतिहाइ बहुमत आएको छ ।
सभापति चयनका लागि २८ मंसिरमा भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइराला निकटतम प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहे । पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले दोस्रो चरणको मतदानमा सभापतिमा देउवालाई समर्थन गरेका थिए ।
कांग्रेसको विधानमा सभापतिमा निर्वाचित हुन आवश्यक खसेका कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप २७ मंसिरमा भएको मतदानमा सभापतिका कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक मत प्राप्त नगरेपछि २८ मंसिरमा पुनः मतदान भएको थियो ।
पदाधिकारीमा मात्रै देउवाको समूहका कुल १३ जनामध्ये आठजना विजयी भएका छन् । जसमा पदाधिकारीतर्फ उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भए । सहमहामन्त्रीमा खस–आर्यबाट किशोरसिंह राठौर, महिलाबाट महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), थारूबाट उमाकान्त चौधरी, मुस्लिमबाट फर्मुल्लाह मन्सुर, आदिवासी–जनजातिबाट भीष्मराज आङ्देम्बे, मधेसीबाट महेन्द्र यादव, दलितबाट जीवन परियार र पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे गरी आठजना निर्वाचित भएका छन् ।
#कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन
पदाधिकारीमा सन्तुलित टिम
३२८२ मत गणना हुँदा देउवाले १५५६ र शेखरले ११९७ मत ल्याए
अबको कांग्रेसमा महिलाको भविष्य कस्तो होला ?
निर्वाचनको अघिल्लो दिन महाधिवेशनस्थलमा जे देखियो...
सबैभन्दा बलियो टिम लिएर मैदानमा उत्रिएका छौँ : डा. मीनेन्द्र रिजाल
१३४ पदका लागि ५४८ जनाको उम्मेदवारी (नामावली सहित)